Accueil > Gazetin'ny nosy > Ampefiloha: Misy andiam-behivavy mpanendaka mpianatra
Ampefiloha: Misy andiam-behivavy mpanendaka mpianatra
Tato anatin’ny volana vitsy teo ho eo izao dia betsaka amin’ireo ray aman-dreny manan-janaka mianatra ao amin’ny Lycée Technique Commercial (LTC) etsy Ampefiloha no velon-taraina. Misy mantsy ny andiam-behivavy mpanendaka eny amin’iny faritra Ampefiloha sy Andavamamba iny ka ireo vehivavy mpianatra ao amin’ny LTC no tena lasibatr’izy ireo. Tsy manambana antsy na mamono tahaka ny fanaon’ireo mpanendaka lehilahy ny fomba fanaon’ireto andiam-behivavy ireto fa teren’izy ireo hanome ny finday na ny vola eny aminy ireo mpianatra. Efa betsaka ireo ray aman-drenin’ny mpianatra no tonga mitaraina amin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sekoly saingy mbola mitohy foana izay fanendahana mpianatra izay raha ny fantatra. Misy moa ny resaka mandeha fa ireo vehivavy mpivaro-tena ao anatina trano fivarotana sy fisotroana zava-pisotro maha mamo iray eny an-toerana no manao izay asa fanendahana izay. Miantso ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana mba hijery akaiky ity raharaha ity ireo ray aman-drenin’ny mpianatra.
Mpiasa malagasy: Tofoky ny fihomboan’ny fahasahiranana
Maro ny fitakian-jo nataon’ny sendikan’ny mpiasa isan-tokony no tsy nisy valiny. Na ny sendikan’ny mpiasam-panjakana na ny sendikan’ny mpiasa tsy miankina. Ao ny tambin-karama ho an’ireo efa misotro ronono, toy ny tafika tranainy sy ny hafa. Ao ny fahatapahan-karama tsy ara-dalàna nefa tsy mbola nitohy. Ao ny tsy fanondrotana ny karama. Ao ny tsy fisian’ny tambin-karama momba ireo sokajin’asa maro mitaky izany, na ny mpitsabo na ny mpiraki-draharaham-pitsarana na ny mpandraharahan’ny fonja, sy ny hafa. Ao ny fiatraikan’ny kolikoly avo lentan’ny mpitondra any amin’ny tontolon’ny asam-panjakana sy ny sehatr’asa misy ny mpiasa malagasy amin’ny ankapobeny. Ny olana amin’ny fisondrotana araka asa (avancement) sy ny manodidina ny fitsinjovana ara-tsosialin’ny mpiasa amin’ny ankapobeny.
Etsy ankilany, tsy mitsaha-midangana ny vidim-piainana, ary ny mpiasa mpandray isam-bolana no tena potehin’izy io satria tsy mba manana fotoana hanaovana ira-kely hitadiavana fidiram-bola hafa.
Ny akon’ny fanamparam-pahefana ataon’ny mpitondra sy ny tsy fahaiza-mitantana, ny tsikombakomba isan-karazany, ny fanodinkodinam-bola sy fitaovam-panjakana, ny fanomezana vahana ny fandrobana ny harem-pirenena sy ny maro tsy ho voatanisa, dia samy nambaran’ny Fivondronamben’ny sendikan’ny mpiasa omaly, na ny “Solidarité Syndicale de Madagascar” (Ssm) fa any amin’ny mpiasa avokoa no iandronan’ny rihitra. Eny, hatramin’ny olan’ny tsy fandriam-pahalemana dia mihatraika any aminay mpiasa, hoy izy ireo.
Ho fanehoana ny tsy fahazakana intsony an’izany rehetra izany sy ny tsy fankasitrahana izao tsy fahombiazan’ny mpitondra fanjakana izao amin’ny tontolon’ny asa, hoy izy ireo, dia hanao hetsika fitokonana (sit in) etsy Anosy, anoloan’ny fitsarana izahay ny zoma ho avy izao.